Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Eritrea oo ku kulmay magaalada Jeddah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Eritrea oo ku kulmay magaalada Jeddah
Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Eritrea oo ku kulmay magaalada Jeddah
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa sanado kadib markii ugu horeysay ku kulmay magaalada Jeddah ee dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya.
Kulankan oo xalay ka dhacay Jeddah ayaa daba socda kulamo ay ku martiqaaday boqortooyada Sucuudi Carabiya inay ku dhexdhexaadiso wadamada geeska Afrika ee khilaafka uu sanado badan u dhexeeyay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Sacuudiga Adel al-Jubair ayaa goobjoog ka ahaa kulansiinta labada Madaxweyne, isagoo sidoo kale kulansiiyay Wasiirada Arrimaha Dibadda dalalka Jabuuti iyo Eritrea.
Itoobiya iyo Eritrea ayaa shalay heshiis taariiqi ah ku kala saxiixday dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana la filayaa in marka uu dhamaado kulamada ay yeelanayaan Madaxda Jabuuti iyo Eritrea ay heshiis kala saxiixdaan.
Dowladda Sucuudi Carabiya ayaa ka shaqeysay kulansiinta Labada Madaxweyne ee deriska ah, waxaana Boqortooyada Sucuudi ay door weyn ka qaadatay inay soo afjarto colaad u dhaxeysay dalalka ku yaalla Geeska Afrika.
Jabuuti iyo Eritrea ayaa khilaafkooda waxa uu salka ku hayay iska horimaad ku dhex maray xadka kala qeybiya labada dal bishii June 2008-dii, iyadoo dowlada Jabuuti xilligaas ku eedeysay dalka deriska la ah ee Eritrea inay ka soo gudubtay xadkii kala qeybinayay labada dal.